ရုံးပိတ်ရက်မှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖတ်ဖို့ ဆရာမ မစန္ဒာရဲ့ စာအုပ်လေး (၅) အုပ် - For her Myanmar
ဒီအပတ်မှာ စာဖတ်ဖို့စိတ်ကူးနေတဲ့ ယောင်းတို့အတွက်
ယောင်းတို့ရေ… Stella တို့တွေက နေ့စဉ်ဘဝမှာ လုံးလည်ချာလည်လိုက်နေတာနဲ့ပဲ နှလုံးသားအာဟာရဖြစ်တဲ့ စာအုပ်တွေကိုဖတ်ဖို့ မေ့လျော့နေတတ်ကြပါတယ်။ စာအုပ်တွေက ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ပြတင်းပေါက်တွေပါ။ အခု Stella ပြောပြပေးမယ့် ဆရာမ မစန္ဒာရဲ့စာအုပ်လေးတွေက ယောင်းကို စိတ်လက်ပေါ့ပါးစေပြီး တွေးစရာတွေလည်းရတဲ့အတွက် တစ်ပတ်မှနှစ်ရက်ရတဲ့ ရုံးပိတ်ရက်လေးမှာ ဖုန်းပွတ်နေမယ့်အစား ဒီစာအုပ်လေးတွေကိုဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်နော်…
ခင်ချို၊ ထွေး၊ မိ၊ ဝေဝေ၊ မော်မော်နဲ့ မမခင်တို့ အဆောင်နေ စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူအုပ်စုအကြောင်း ရေးထားတဲ့ ဂျီဟောသူ စာအုပ်က ယောင်းတို့ကို အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။ ကျောင်းသူဘဝ ဗရုတ်ကျချက်တွေကို ဖတ်ပြီး အတောမသတ်အောင် ရယ်ရမယ့်အပြင် ယောင်းရဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘဝကို ပြန်အမှတ်ရစေမှာပါ။ သူတို့ခေတ်က တက္ကသိုလ်နဲ့ ကိုယ့်ခေတ် တက္ကသိုလ် ယှဉ်ကြည့်ပြီး ရင်ထဲ တစ်မျိုးဖြစ်သွားမှာကတော့ ကျိန်းသေပါပဲ ယောင်းတို့ရေ…
ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့ မိဘတွေရဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသမီး၊ ခပ်ဆိုးဆိုးကောင်မလေး၊ ငွေကို ရေလိုသုံးလာတဲ့ ကောလိပ်ကျောင်းသူ နွယ် (သို့မဟုတ်) ဂျစ်တူး…အရီးမြရှိရာ ပန်လွယ်ကို သွားလည်ရာက အိမ်က မုန့်ဖိုးဖြတ်လိုက်တော့ ဦးဆိုးပေကြီးအိမ်မှာ ရရာအလုပ်ဝင်လုပ်ပါလေရော။ လူရိုးလူအေး ဦးဆိုးပေကြီးခမျာ ခပ်ရွတ်ရွတ် ခပ်နောက်နောက် ကောင်မလေး နွယ်ကိုမှ သံယောဇဉ်တွယ်မိလေတော့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ….
နွယ်ရဲ့ ဦးဆိုးပေကြီးကို ပညာပေးပုံတွေ၊ နွယ်နဲ့အပေါင်းအပါကလေးတစ်သိုက်ရဲ့ အလွဲပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်တွေကို ဖတ်ပြီး ပါးစပ်မပိတ်နိုင်အောင် ရယ်မောရမှာမို့ အသက်တစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ်ကို ပြန်ရောက်သွားသလို ခံစားချက်မျိုးကိုပေးမယ့် ဝတ္ထုလေးပါပဲ။
ကိုတူးနဲ့ စူးမာဟာ မောင်နှမလေးယောက်ထဲက အလတ်နှစ်ယောက်။ ဆေးကျောင်းသူအမကြီးနဲ့လည်း မရင်းနှီးတဲ့အပြင် မိဘနှစ်ပါးကလည်း အငယ်ဆုံး တာတီးလေးကိုပဲ အာရုံစိုက်နေမိတဲ့အခါ အလတ်နှစ်ယောက်ရဲ့စိတ်မှာ ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာကို ဆရာမ မစန္ဒာက ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရေးပြထားပါတယ်။ မိဘတိုင်းလိုလို ဖတ်သင့်ပြီး မိဘမဖြစ်လာသေးတဲ့သူတွေလည်း မဖြစ်မနေ သိထားရမယ့်အချက်လေးတွေ၊ သတိပြု ရှောင်ကြဉ်ရမယ့် အချက်လေးတွေကိုလည်း တွေ့ရမှာပါ။ Stella အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်တွေထဲက တစ်အုပ်မို့ ယောင်းတို့ကိုလည်း ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်နော်။
ကျော်ထွန်းညို၊ အမာညို၊ ညီလင်းတို့ မောင်နှမ။ ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံပေမဲ့ မိဘမေတ္တာငတ်နေတဲ့ စု၊ အမာညိုရဲ့သူငယ်ချင်း သက်သက်။ ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ ငယ်ရာကကြီးလာတဲ့ဘဝတစ်လျှောက်ကို မြင်လာရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်တိုင် သူတို့ရဲ့ဘဝတစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်သွားသလို ခံစားရမယ့် ဝတ္ထုပါ။ အဲ့ခေတ်အခါက လူကုံထံအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ပါတီပွဲတွေ၊ ကျောင်းသားဘဝတွေနဲ့ မူးယစ်ဆေးရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကို မျက်စိထဲမြင်လာအောင် သရုပ်ဖော်ထားပြီး လက်ကမချချင်လောက်အောင် စွဲတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ပါပဲ။
ဇော်နဲ့မော်အမြွှာမောင်နှမရဲ့အဖေက နှင်း ဆိုတဲ့ နောက်မိန်းမငယ်ငယ်ချောချောလေးကို ကောက်ယူလိုက်တဲ့အခါ…ဇော်နဲ့မော်က နှင်းကိုမုန်းကြမှာလား၊ သူတို့မောင်နှမရဲ့အဖေ ဆုံးပါးသွားတဲ့အခါ နှင်းနဲ့ လင်ပါသားသမီးနှစ်ယောက်ကြားမှာ ဘယ်လိုဆက်ဆံရေးတွေဖြစ်လာမလဲ၊ နှင်းမှာ ဘယ်လိုအတိတ်တွေရှိခဲ့လဲဆိုတာကို ဆရာမ မစန္ဒာရဲ့ နှင်းဆီ ဝတ္ထုမှာ ဖတ်ရမှာပါ။
ပြောပြပေးသွားတဲ့ စာအုပ်လေးတွေကိုဖတ်ရင် ယောင်းတို့ အကြိုက်တွေ့ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်။ ဒီအပတ်မှာတော့ စာဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်လိုက်ရအောင် ယောင်းတို့ရေ။
ဒီအပတျမှာ စာဖတျဖို့စိတျကူးနတေဲ့ ယောငျးတို့အတှကျ
ယောငျးတို့ရေ… Stella တို့တှကေ နစေ့ဉျဘဝမှာ လုံးလညျခြာလညျလိုကျနတောနဲ့ပဲ နှလုံးသားအာဟာရဖွဈတဲ့ စာအုပျတှကေိုဖတျဖို့ မလြေ့ော့နတေတျကွပါတယျ။ စာအုပျတှကေ ကမ်ဘာကွီးရဲ့ ပွတငျးပေါကျတှပေါ။ အခု Stella ပွောပွပေးမယျ့ ဆရာမ မစန်ဒာရဲ့စာအုပျလေးတှကေ ယောငျးကို စိတျလကျပေါ့ပါးစပွေီး တှေးစရာတှလေညျးရတဲ့အတှကျ တဈပတျမှနှဈရကျရတဲ့ ရုံးပိတျရကျလေးမှာ ဖုနျးပှတျနမေယျ့အစား ဒီစာအုပျလေးတှကေိုဖတျကွညျ့စခေငျြပါတယျနျော…
ခငျခြို၊ ထှေး၊ မိ၊ ဝဝေေ၊ မျောမျောနဲ့ မမခငျတို့ အဆောငျနေ စကျမှုတက်ကသိုလျကြောငျးသူအုပျစုအကွောငျး ရေးထားတဲ့ ဂြီဟောသူ စာအုပျက ယောငျးတို့ကို အကွိုကျတှစေ့မှောပါ။ ကြောငျးသူဘဝ ဗရုတျကခြကျြတှကေို ဖတျပွီး အတောမသတျအောငျ ရယျရမယျ့အပွငျ ယောငျးရဲ့တက်ကသိုလျကြောငျးသူဘဝကို ပွနျအမှတျရစမှောပါ။ သူတို့ခတျေက တက်ကသိုလျနဲ့ ကိုယျ့ခတျေ တက်ကသိုလျ ယှဉျကွညျ့ပွီး ရငျထဲ တဈမြိုးဖွဈသှားမှာကတော့ ကြိနျးသပေါပဲ ယောငျးတို့ရေ…
ငှကွေေးခမျြးသာတဲ့ မိဘတှရေဲ့ တဈဦးတညျးသောသမီး၊ ခပျဆိုးဆိုးကောငျမလေး၊ ငှကေို ရလေိုသုံးလာတဲ့ ကောလိပျကြောငျးသူ နှယျ (သို့မဟုတျ) ဂဈြတူး…အရီးမွရှိရာ ပနျလှယျကို သှားလညျရာက အိမျက မုနျ့ဖိုးဖွတျလိုကျတော့ ဦးဆိုးပကွေီးအိမျမှာ ရရာအလုပျဝငျလုပျပါလရေော။ လူရိုးလူအေး ဦးဆိုးပကွေီးခမြာ ခပျရှတျရှတျ ခပျနောကျနောကျ ကောငျမလေး နှယျကိုမှ သံယောဇဉျတှယျမိလတေော့ ဘာတှဆေကျဖွဈမလဲဆိုတာ…. နှယျရဲ့ ဦးဆိုးပကွေီးကို ပညာပေးပုံတှေ၊ နှယျနဲ့အပေါငျးအပါကလေးတဈသိုကျရဲ့ အလှဲပေါငျးသောငျးခွောကျထောငျတှကေို ဖတျပွီး ပါးစပျမပိတျနိုငျအောငျ ရယျမောရမှာမို့ အသကျတဈဆယျ့ရှဈနှဈကို ပွနျရောကျသှားသလို ခံစားခကျြမြိုးကိုပေးမယျ့ ဝတ်ထုလေးပါပဲ။
ကိုတူးနဲ့ စူးမာဟာ မောငျနှမလေးယောကျထဲက အလတျနှဈယောကျ။ ဆေးကြောငျးသူအမကွီးနဲ့လညျး မရငျးနှီးတဲ့အပွငျ မိဘနှဈပါးကလညျး အငယျဆုံး တာတီးလေးကိုပဲ အာရုံစိုကျနမေိတဲ့အခါ အလတျနှဈယောကျရဲ့စိတျမှာ ဘယျလိုခံစားရမလဲဆိုတာကို ဆရာမ မစန်ဒာက ကှကျကှကျကှငျးကှငျးရေးပွထားပါတယျ။ မိဘတိုငျးလိုလို ဖတျသငျ့ပွီး မိဘမဖွဈလာသေးတဲ့သူတှလေညျး မဖွဈမနေ သိထားရမယျ့အခကျြလေးတှေ၊ သတိပွု ရှောငျကွဉျရမယျ့ အခကျြလေးတှကေိုလညျး တှရေ့မှာပါ။ Stella အကွိုကျဆုံးစာအုပျတှထေဲက တဈအုပျမို့ ယောငျးတို့ကိုလညျး ဖတျကွညျ့စခေငျြပါတယျနျော။
ကြျောထှနျးညို၊ အမာညို၊ ညီလငျးတို့ မောငျနှမ။ ပစ်စညျးဥစ်စာပွညျ့စုံပမေဲ့ မိဘမတ်ေတာငတျနတေဲ့ စု၊ အမာညိုရဲ့သူငယျခငျြး သကျသကျ။ ဇာတျကောငျတှရေဲ့ ငယျရာကကွီးလာတဲ့ဘဝတဈလြှောကျကို မွငျလာရတဲ့အခါမှာ ကိုယျတိုငျ သူတို့ရဲ့ဘဝတဈစိတျတဈဒသေဖွဈသှားသလို ခံစားရမယျ့ ဝတ်ထုပါ။ အဲ့ခတျေအခါက လူကုံထံအသိုငျးအဝိုငျးရဲ့ ပါတီပှဲတှေ၊ ကြောငျးသားဘဝတှနေဲ့ မူးယဈဆေးရဲ့ဆိုးကြိုးတှကေို မကျြစိထဲမွငျလာအောငျ သရုပျဖျောထားပွီး လကျကမခခြငျြလောကျအောငျ စှဲတဲ့စာအုပျတဈအုပျပါပဲ။
ဇျောနဲ့မျောအမွှာမောငျနှမရဲ့အဖကေ နှငျး ဆိုတဲ့ နောကျမိနျးမငယျငယျခြောခြောလေးကို ကောကျယူလိုကျတဲ့အခါ…ဇျောနဲ့မျောက နှငျးကိုမုနျးကွမှာလား၊ သူတို့မောငျနှမရဲ့အဖေ ဆုံးပါးသှားတဲ့အခါ နှငျးနဲ့ လငျပါသားသမီးနှဈယောကျကွားမှာ ဘယျလိုဆကျဆံရေးတှဖွေဈလာမလဲ၊ နှငျးမှာ ဘယျလိုအတိတျတှရှေိခဲ့လဲဆိုတာကို ဆရာမ မစန်ဒာရဲ့ နှငျးဆီ ဝတ်ထုမှာ ဖတျရမှာပါ။
ပွောပွပေးသှားတဲ့ စာအုပျလေးတှကေိုဖတျရငျ ယောငျးတို့ အကွိုကျတှကွေ့လိမျ့မယျလို့ ထငျပါတယျနျော။ ဒီအပတျမှာတော့ စာဖတျဖွဈအောငျ ဖတျလိုကျရအောငျ ယောငျးတို့ရေ။
Tags: Art, Author, Book, Book review, Books, Knowledge, must read, nerd, reading, review, writer